Magaca Mohammed oo ka mid noqday magacyada ugu caansan dalka Faransiiska… – Hagaag.com
Magaca Mohammed oo ka mid noqday magacyada ugu caansan dalka Faransiiska…
Posted on 6 Seteembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Kadib markii uu noqday magaca Mohammed kan ugu caansan ee wiilasha ku dhashay dalka Britain loo bixiyo sanadka 2019, ayaa hadana magaca Maxammed wuxuu galayaa markii ugu horeysay abid magacyada ugu caansan Faransiiska.
Sida laga soo xigtay Xarunta Qaranka ee loogu talagalay Istaatistikada iyo Daraasaadka Dhaqaalaha (INSEE), in magaca ” Mohammed ” loo bixiyey 2460 dhallaan sanadkii 2018, taas oo ka dhigtay inuu galo liiska 20ka magac ee ugu caansan dalka Faransiiska, wuxuu imanayaa kadib magacyada ” Tom ” iyo ‘Aaron’ oo ah kuwa ugu caansan.
Machadka ayaa sheegay in magaca Mohammed uu laba jibaarmay caruurta ku dhalatay Faransiiska inta u dhaxdeyso sanadaha 1998 ilaa 2018, taasi oo barta “LCI” ee Faransiisska ku sheegtay inuusan aheyn wax lala yaabo, maadaama 50kii sano ee la soo dhaafay ka mid ahaa magacyada aadka u faafa dalka Faransiiska.
Luqada Carabiga magaca waa Maxammed oo hadda Muslimiinta doorbidaan, halka dadka Turkida ugu dhowaaqaan “Mehmet”, sidoo kaloo dadka Afrikaanka ayaa u baxsada “Mamdou” sidaasi ayey ugu dhowaaqaan bedelkii Mohammed.
Tani maahan wax la yaab leh, maaddaama ay caado u tahay qoysaska Muslimiinta ah in ay ugu magac daraan Maxammad ilmaha ugu horeeya oo wiil ah oo u dhasha, waxay ku dartay in magaca Mohammed run ahaantii yahay kan ugu baahsan oo la baxsado adduunka, sidaasi waxaa sheegtay wargeyska Le Parisien.